Maxkamadda darajada koowaad ee Soomaaliya ciidanka oo xukunno ridday | Ilwareed.com Isha wararka iyo warbixinada Somalida oo dhan, iyo dhacdooyinka caalamka
Maxkamadda darajada koowaad ee Soomaaliya ciidanka oo xukunno ridday
Posted By ilwareed on Thursday, May 30th 2013 20:42 EAT
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukunno kala duwan ku ridday rag ka tirsanaa ciidanka oo lagu helay dembiyo la xiriira dilal ay u gaysteen nin rayid ahaa iyo askari ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Nuur Hilowle Caddaawe oo ahaa dable ka tirsan gaaska afaraad ee ciidanka xoogga ayay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah, kaddib markii lagu helay caddeymo muujinaya inuu bishii December ee sanadkii hore degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir ku dilay nin rayid ahaa oo lagu magacaabi jiray Cabdirashiid Ciise Aw-Maxamuud.
Maxkamaddu waxay diyo boqol halaad oo geel ah ku xukuntay inuu bixiyo Garruun Caddow Raage oo ah dable ka tirsan ciidanka xoogga dalka, kaas oo ay ku caddaatay inuu xaafadda Carrafaad ee degmada Yaaqshiid ku dilay Cabdi Cumar Cali oo isaguna dable ahaa.
Maxkamadda ayaa sii daysay labo eedeysane oo lagu waayay caddeymo la xiriira eeddii loo haystay oo ahayd inay ku lug lahaayeen dilkii loo gaystay Cabdirashiid Ciise Aw-Maxamuud.
Cabdullaahi Maxamed Muuse (Keyse) oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya oo xukunka ku dhawaaqay ayaa sheegay in ciddii rafcaan ka qaadanaysa xukunnada la riday ay haysato muddo 30 cisho ah inay ugu gudbiso maxkamadda sare ee ciidanka.